General contracting mamiriro ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
General kondirakiti mamiriro
Usati wawana chero sevhisi yatinowana kwauri pane ino webhusaiti, zvakakosha kuti iwe uverenge mamiriro nemitemo inoshanda kune kupihwa kwemasevhisi anopiwa neApplePop.com ayo akanangana nebasa rayo guru rechigadzirwa kana sevhisi. tsananguro.: Kutengeswa kwezvigadzirwa mumadhijitari fomati uye pamhepo kushambadzira masevhisi.
Mushandisi anogona chete kuwana uye kubvumirana neaya AndroidPop.com masevhisi mushure mekuverenga nekutambira aya mamiriro ekubvumirana.
Nekubvuma aya mamiriro, mushandisi akasungwa neaya mazwi, ayo, pamwe neyakavanzika mutemo, anotonga hukama hwebhizinesi redu.
Kana iwe usingabvumirani nechero chikamu chemashoko, iwe haugone kubhadhara mabasa anopihwa.
AndroidPop.com inochengetera kodzero yekugadzirisa kana kushandura aya mamiriro chero nguva. Kana izvo zvigadziriso zvikaita shanduko yezvinhu kumatemu, AndroidPop.com inokuzivisa iwe nekutumira chiziviso pane ino webhusaiti.
Iwo masevhisi anopihwa anowanikwa kune vepamutemo chete uye vanhu vanopfuura makore gumi nemasere ezera.
Aya mazwi akagadziridzwa kekupedzisira musi wa 14/04 / 2016
Zvinoenderana nezvirongwa zveMutemo 34/2002 paDare reRuzivo Society neElectronics Commerce (LSSICE), ruzivo runotevera rwunopihwa:
• Zita rekambani iri: Online servicios Telemáticos SL
• Hofisi yakanyoreswa iri muC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Kuzivikanwa muAJPD: "Vashandisi uye vanyoreriwebhuwebhu" "Vatengi uye vatengesi".
• Basa rezvemagariro ndere: kushambadzira pamhepo masevhisi.
Mabasa anopihwa pane ino webhusaiti
AndroidPop.com inoita kuti anotevera masevhisi awanikwe zvichienderana nemamiriro ayo ekubvumirana:
• Dhizaini yepamhepo / isina nzira yekukurukurirana nzira.
• Kunyora zvinoburitswa zvinoburitswa uye kutumira kwenyika kana zvikamu.
• Corporate zvinyorwa kunyora.
• Ukama neredhiyo nemamiririri.
• Dhijitari mafoto ekudhinda, webhu uye zviitiko.
• Basic kudzokorora muJPG uye kukura kweRAW.
• Yekutanga kudzidziswa padhijitari mafoto.
• SEO kubvunza kwewebhu, blog uye e-Commerce.
• Yekutanga SEO yezvinyorwa zvewebhu.
• Kuongororwa uye kugadzirwa kwezvibodzwa faira (SEO kubva peji).
• Kuiswa, kugadziriswa uye optimization yeWordPress kana Joomla.
• Zvemukati mamiriridziro: mapepanhau, magazini, mabhuku, mabhuku, mabrochure, pdf uye ebook,
• Basic dhizaini emakadhibhodhi, makadhi, mafirayiri, mabhana uye CTA yewebhu.
Zvekushambadzira zvemukati uye Inbound Kushambadzira
• Kuronga kwemaitiro uye chirongwa chemagariro.
• Zvekunyora zvemukati zvemablogi, mawebhusaiti kana microsites.
• Management of profiles uye zvemagariro zvinhu (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google)
• SEM kampeni (AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads)
• Nhau uye kushambadzira kutaura.
• Unyanzvi kudzora matafura eanalog.
Semamiriro ezvinhu kubvumirana masevhisi anopihwa, iwe unofanirwa kunyoresa mune fomu rakakodzera paAndroidPop.com uye upe ruzivo rwekunyoresa. Ruzivo rwekunyoresa iwe rwaunopa runofanirwa kuve rwechokwadi, rwakakwana, uye razvino nguva dzese. Kukundikana kuita izvi kunokanganisa mazwi, izvo zvinogona kukonzera kuparara kwechibvumirano neAroidPop.com.
Chechitatu bato mhinduro
Mamwe masevhisi anogona kusanganisira vechitatu-bato mhinduro. AndroidPop.com inogona kupa zvinongedzo kune echitatu bato mawebhusaiti senge AndroidPop.com vadyidzani vanobatsirana nekupihwa kweamwe masevhisi.
Iwe unobvumawo kuti Sevhisi inogona kusanganisira mhinduro dzekuchengetedza dzinogumira kushandiswa uye kuti unofanirwa kushandisa masevhisi aya maererano nemitemo yekushandisa yakasimbiswa neApplePop.com nevano chengetedzeka navo uye kuti kumwe kumwe kushandiswa kungave kukanganisa kutyora kodzero.
Kuchinja, kudzora, kudzosera ouinjiniya, kuparara, kupaza kana kugadzirisa chero nzira tekinoroji yekuchengetedza yakapihwa neApplePop.com chero chikonzero chakarambidzwa.
Kuchengetedzwa kwakaputsa kwehurongwa kana network kunogona kukonzera mhosva yevagari vevanhu kana mhosva.
Mitengo uye nzira dzekubhadhara
Unobvuma kubhadhara masevhisi akabvumirwa kuAndroidPop.com nenzira dzekubhadhara dzinotambirwa neAroidPop.com uye nechero imwe mari (kusanganisira mutero nemari yekunonoka, sezvazvingaite)
Kubhadhara kunogara kuri 100% pamberi uye masevhisi anozopihwa kana isu tavimbisa kubhadhara.
Mitengo inoshanda kune imwe neimwe chigadzirwa uye / kana sevhisheni ndeiya anoratidzwa webhusaiti pazuva reodha, kusanganisira, pazvinoshanda, ese VAT (Yekukosha Yakawedzerwa mutero) yekutengeserana mukati meSpanish ndima.
Maitiro akajairika emutero unowedzera mutero weEuropean Union
Zvinoenderana nezvinodiwa neMutemo 37/1992, waDecember 28, maneja akati mutero uye European Directive 2008/8 / EC, oparesheni inogona kusabvumirwa kana kusazvitendera zvinoenderana nenyika yekugara yemutengi uye yemamiriro ezvinhu umo izvo zvakafanana zviitwa (muzvinabhizimusi / nyanzvi kana munhuwo zvake). Nekuda kweizvozvo, mune dzimwe nguva mutengo wekupedzisira wekuraira unogona kuchinjwa maererano nezvakataurwa pawebsite.
Mutengo wemasevhisi kana infoproduct inotengeswa neApplePop.com inosanganisira iyo Spanish VAT. Nekudaro, iyo yekupedzisira mutengo wekuraira kwako inogona kusiyana zvichienderana nehuwandu hweVAT hunoshanda kune yekuraira. Zvekudaira zvakatemerwa dzimwe nyika dzeEuropean Union, Spanish VAT ichabviswa uye mutero weVAT unoenderana nenyika yaunoda kuenda unoshandiswa. Mutengo wekupedzisira uchaonekwa panguva yekusimbiswa kweodha yako uye inoratidza chiyero cheVAT chinoenderana nenyika yekuenda kune zvigadzirwa.
Mitengo yeMasevhisi inogona kuchinja chero nguva mune yega uye yakasarudzika sarudzo yeAroidPop.com. Iwo maSevhisi haapi chengetedzo yemutengo kana kudzoreredza mune zvinoitika zvekudzikiswa kwemitengo kana kupihwa kwekusimudzira.
AndroidPop.com inogamuchira idzi nzira dzekubhadhara:
Modation yekutsigira uye kushandisa zvine musoro
Masevhisi anofanirwa kukumbirwa kuburikidza neakakodzera nzira dzinogamuchirwa uye kupindurwa mukati menguva yakafanira yenguva.
Aya chiteshi ndiwo mafomu akakodzera ari mune yega yevhisi inopihwa.
Chikumbiro chega chega chinoitirwa kuongorora uye kubvumidzwa neAndroidPop.com.
AndroidPop.com inogona kupa dzimwe mhinduro dzevatengi kusanganisira kuendesa kune iyo AndroidPop.com shamwari network.
Kushandisa zvinonzwisisika mushumo
Izwi rekuti "risingagumi" rinoenderana nechikamu chakakodzera chekushandisa. Tsananguro yekushandiswa kwakanaka inoonekwa ne AndroidPop.com, mune yayo yega uye yega sarudzo. Vatengi vanotenda kuti AndroidPop.com vanotenda kuti vari kushandisa zvisizvo sevhisi vachasangana na AndroidPop.com.
AndroidPop.com inochengetera kodzero yekumisa sevhisi kana tichifunga kuti inodarika chinonzwisisika chekushandisa.
AndroidPop.com haizovimbise kuti kuwanikwa kwechinhu chechibvumirano chechibvumirano ichi kucharamba kuchienderera uye kusingakanganisike, pamwe nekurasikirwa kwedata kunogarwa pamaseva ayo, kukanganisa kwezvinhu zvebhizimusi kana chero kukuvara kunobva mukushanda kwemasevhisi. , kana izvo zvinotarisirwa zvakagadzirwa kune Mutengi, semhedzisiro ye:
1. Zvinokonzera kupfuura kutonga kwe AndroidPop.com uye fortuitous uye / kana zvikonzero zvikuru.
2. Kuputsa kunokonzerwa nekushandisa zvisiri izvo neVatengi, kunyanya izvo zvinobva mukubvumidzwa kwebasa risina kukodzera remhando yechiitiko uye kushandiswa kwakaitwa neMutengi uye / kana nevechitatu mapato kuburikidza newebsite yavo.
3. Yakarongwa kumira uye / kana shanduko mune izvo zvakagadzirwa nekubvumirana pakati pemapato kuitira kuchengetedza kana kuita kwezvinhu zvakasarudzika zvaimbo bvumirana pane.
4. Hutachiona, kurwiswa kwemakomputa uye / kana zvimwe zviito zvevechitatu zvinokonzeresa kukwana kana chikamu chidimbu chekupa masevhisi.
5. Kuita zvisiri izvo kana kusashanda zvakanaka zveInternet.
6. Mamwe mamiriro ezvinhu asingatarisirwa.
Nenzira iyi, Mutengi anobvuma kutsigira mamiriro ezvinhu aya mukati memiganhu inonzwisisika, saka iye anotsigira achidaro anoti Online Services Telemático SL chero chibvumirano kana chakawedzera-chibvumirano chinhanho chekukanganisa, zvikanganiso uye kushandiswa kwechibvumirano.
PaInternet Servicios Telematico SL haizove nemhosva mune chero zvipi zvikanganiso kana kukuvara kunokonzerwa nekusakwana uye kwakaipa kwekutenda kushandiswa kwebasa neMutengi. Kana iyo Online Servicios Telematico SL inova nemhosva yezvikuru kana zvidiki mhedzisiro nekuda kwekushaikwa kwekutaurirana pakati peInternet Servicios Telematico SL neMutengi kana ichikonzerwa nekusashanda kweemail yakapihwa kana kunyepedzera kwedhata rakapihwa neMutengi mukunyora kwavo kwevashandisi. kubva kuAndroidPop.com.
Zvinokonzeresa kuputswa kwechibvumirano
Kupedzwa kwechibvumirano chebasa kunogona kuitika chero nguva nechero bato.
Iwe hauna kusungwa nemamiriro ekugara ne AndroidPop.com kana iwe usina kugutsikana nebasa redu.
AndroidPop.com inogona kumisa kana kumisa chero uye ese maSevhisi akatorwa neAndroidPop.com nekukasira, pasina ziviso kana chikwereti, kana ukasaita zvinoenderana nezvinotaurwa pano.
Kana kwapera chibvumirano, kodzero yako yekushandisa maSevhisi ichapera pakarepo.
Izvi zvinotevera zvikonzero zvekuparadzwa kwechibvumirano:
• Iyo manyepo, yakazara kana chikamu, ye data rakapihwa mukukonzeresa chero basa.
Chinja, tenderedza, shandura mainjiniya, kuora, kusanganisa, kana neimwe nzira shandura tekinoroji yekuchengetedza yakapihwa neApplePop.com.
• Zvakare nyaya dzekushungurudzwa kwemasevhisi ekutsigira nekuda kwekudikanwa kwemaawa akawanda kupfuura ayo anotangwa muchibvumirano.
Iko kupera kunoreva kurasikirwa kwekodzero dzako pamusoro peiyo contract contract.
Kuvimbika kwemitengo uye zvinopihwa
Iwo masevhisi anopihwa pawebhu, nemitengo yeizvi, ichavepo kuti itengese ivo vari mukatikati yemasevhisi anoratidzwa kuburikidza newebhusaiti. Vashandisi vanokumbirwa kuwana vhezheni dzakavandudzwa dzewebsite kuti vadzivise kukanganisa kwemitengo. Chero zvazvingaitika, mairairo ari kuita anochengetedza mamiriro avo kwemazuva manomwe kubva panguva yekunyorwa kwavo.
Kubvisa ndiko simba remutengi weakanaka kuti aridzosere kutengeserana mukati menguva yepamutemo yemazuva gumi nemana, pasina kubvunza kana kupa chero tsananguro kana kutambura chirango.
Iyo kodzero yekubvisa inogona kunge isingaitiswe (kunze kwekukanganisa kana kuremara muchigadzirwa kana sevhisi yakapihwa chibvumirano), munezviitiko zvinotevera zvakapihwa nechinyorwa 45 cheMutemo weCommerce:
• Zvibvumirano zvekugoverwa kwemidziyo yakagadzirwa zvinoenderana nezvinorehwa nemutengi kana zvakasarudzika zvakajeka, kana izvo, nemasikirwo azvo, hazvigone kudzoserwa kana kuti zvinogona kushatisa kana kupera nekukurumidza.
• Zvibvumirano zvekugoverwa kwemakodhi kana vhidhiyo kurekodha, ma disc uye macomputer zvirongwa zvakavhurwa nemutengi, pamwe nemafaira emakombiyuta, anopiwa zvemagetsi, ayo anogona kutorwa kana kubudiswazve nekukasira kuti ushandise zvachose.
• Uye kazhinji zvinhu zvese izvo zvigadzirwa zvinorayirwa nechekure izvo zvinoitirwa isu kuyera: zvipfeko, kusimudzira mifananidzo, nezvimwewo, kana zvinowoneka kutevedzera (mabhuku, mimhanzi, mitambo yemavhidhiyo, nezvimwewo).
Nguva yekubvisa mukati digital zvigadzirwa (senge mabhuku ebudhijitari), ichamiswa panguva iyo makiyi ekuwanira zvinyorwa zvemadhijitari anoshandiswa.
Kodzero yekubvisa, zvinoenderana nechinyorwa 103.a cheMutemo 1/2007, haizoshandiswe pakupihwa kwemasevhisi, kana sevhisi yapera kuitwa, kuitiswa kwatanga, nemvumo yapamberi yemutengi uye mushandisi uye nekuzivikanwa kwavo ivo vanoziva kuti, kana chibvumirano chaitwa zvizere neAroidPop.com, achange arasa kodzero yake yekubvisa.
Mushure mekubvuma mashandiro emabasa echibvumirano, AndroidPop.com inokuzivisa iwe nezve zuva rekutanga rakafanana.
Kana iyo kodzero yekugadzirisa ichiitwa 10 mazuva Basa risati ratanga, AndroidPop.com ichadzorera iyo mari inogamuchirwa pasina chengetedzo uye haina kumbobvira yapera mazuva gumi nemana. Kana iyo kodzero yambotaurwa yanga yashandiswa mune kutara zvisingasviki mazuva gumi, 50% yemari yacho ichadzoserwa, uye kana ikazoitwa gare gare, hapana mari inobhadharwa.
Saizvozvo, AndroidPop.com inogona kuenderera mberi nekumisa chibvumirano kana mushandisi asingaite mubhadharo unoenderana kana zvimwe zvezviito zvakatarwa muchikamu chezvikonzero zvekuparadzwa kwechibvumirano zvakaitwa.
Maitiro ekudzima chibvumirano chebasa
Kana iwe uchida kukanzura kondirakiti yako neAroidPop.com, unofanira kutibata nesu nechikumbiro chekubuda muchibvumirano basa rebvumirano risati ratanga kushanda (ona maitiro uye fomu yekubvisa pazasi)
AndroidPop.com inovimbisa mutengi kudzoserwa kwemari dzakabhadharwa mukati menguva gumi nemana (14) mazuva ekarenda kubva pazuva rekutaurirana kwakatendeseka kwekuitwa kwekodzero yavo yekubvisa chero zvikaenderana nezvinodiwa uye zvave kutambirwa neAppopPop. com.
Kana uchibviswa newe, tichadzosera zvese zvabhadharwa zvawakaitira isu pasina kunonoka uye, chero zvakadaro, hapana kupera mazuva gumi nemana yekarenda kubva pazuva rataziviswa nezvesarudzo yako yekubvisa. yechibvumirano ichi uye nekupa yakaziviswa mazuva gumi zuva rekutanga revasungwa chibvumirano risati ratanga.
Tichaenderera mberi nekudzosera zvakataurwa tichishandisa nzira imwechete yekubhadhara yakashandiswa newe kutengeserana kwekutanga, kunze kwekunge watopa zvakajeka neimwe nzira; Chero zvazviri, hauzobhadharisa chero mari nekuda kwemubhadharo.
Kana basa rebasa chibvumirano ichi rakatanga munguva yekubviswa (mazuva gumi nemana), zvinoenderana neChinyorwa 14 cheMutemo 108.3/1, Online servicios Telemáticos SL inogona kuchengetedza chikamu chakaenderana nebasa rakapihwa, kusanganisira basa. yekutsigira uye, muchiitiko icho basa rave rakapihwa zvizere, zvinoenderana nechinyorwa 2007.a yemutemo uripo, kodzero yekubvisa haichashande.
Inodzoka inoenderana nemabhadharo akaitwa kuburikidza nePayPal kana Stripe ichaitwa kuburikidza neiyo chiteshi, nepo imwe mhando yemhando yekudzosera ichaitwa nekutumira kubhengi kuaccount yakapihwa nemutengi. Kudzoserwa kweiyo mari kuchaitwa mumazuva gumi nematatu anotevera kubva pazuva rataziviswa nezvesarudzo yako yekubvisa.
Zvese masevhisi atakapa kwauri, nehunhu hwavo, vachapona nezvekuparadzwa kana vakabhadharwa zvakakwana, kusanganisira, pasina muganho, zvigadzirwa zvemidziyo, zvidzikiso, muripo uye kudzikiswa kwemhosva.
Model chikumbiro kana fomu yekubvisa
Mushandisi / mutengi anogona kutizivisa nezvechikumbiro kana kubviswa, kungave ne email kune: info (at) contact.online kana nepositi mail pakero inoratidzwa mune yekubvisa fomu.
Kopa uye unamate fomu iri muIzwi, riizere uye ritumire neemail kana kutumira.
Zvekutarisa kweInternet servicios Telemáticos SL
C / Blas de Otero º16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada).
Ini pano ndinokuzivisai kuti ini ndinotora / kuregedza chibvumirano chekutengesa kune chinotevera chakanaka / kupihwa kweanotevera masevhisi:
Akabira zuva: ………….
Kana uchitsutsumwa, ratidza chikonzero:
KANA WAKABVUMA CREDIT YEMAHARA kuti uwane mari yekutenga iri kure, sanganisira iyo inotevera mavara mune yako yekubvisa ziviso.
Iwe zvakare unoziviswa kuti zvinoenderana nechinyorwa 29 cheMutemo 16/2011, June 24, zvibvumirano, kuti, sezvo ini ndabvapo kubva pachibvumirano chekugovera zvinhu / masevhisi uye ndakapihwa mari zvachose / chidimbu nenzira yechikwereti chakabatanidzwa. Ini handichazosungwa nechero ndakataura chibvumirano ndisina chirango.
Tevere, ratidza zita rako sevatengi uye mushandisi kana yevatengi uye vashandisi:
Zvino ratidza kero yako semutengi uye mushandisi kana yevatengi nevashandisi:
Ratidza zuva raunoverenga / kubvumidza chibvumirano:
Saina chako chaunoti / chikumbiro chekubvisa kana chakaziviswa kuInternet servicios Telemáticos SL mune mapepa
(nzvimbo), ku ……………………………… ya ………………………. pamusoro 20…
Kudzoserwa kweiyo mari kuchaitwa mukati memazuva gumi nematatu anotevera kubva pazuva iro kudzoka kwako kwatenderwa.
European Consumer Regulation
European Commission yakagadzira yekutanga yeEuropean platform yekugadzirisa mhirizhonga mu online commerce yakafukidzwa nemutemo wevatengi wapfuura. Neiyi pfungwa, semutoro weinternet yekutengesa online, tine basa rekuzivisa vashandisi vedu nezve kuvapo kwepamhepo online yenheyo yekugadzirisa kupokana.
Kuti ushandise chikuva kugadzirisa gakava, mushandisi anofanira kushandisa chinotevera chinongedzo. http://ec.europa.eu/odr
Kuchengetedza kwega data
Zvinoenderana neOrganic Mutemo 15/1999, waZvita 13, paDziviriro yeMunhu dhata, Online servicios Telemáticos SL inotaurira mushandisi kuti pane yako data faira inozivikanwa se "Vatengi / Vatengesi" inogadzirwa uye pasi Kuzvidavirira kweInternet servicios Telemáticos SL nezvinangwa zvakakodzera kurapwa pakati pezvizvi:
1. a) Kutungamira kwehukama hwepamutemo-hupfumi hukama pakati pemubati pamwe nevatengi vake.
2. b) Manejimendi echibvumirano chebasa nemutengi.
Kusvika pamwero unobvumidzwa nebato rinofarira; kuve mutoro wemushandisi iko kuchenjera kwezvakafanana.
Kana zvinopesana zvisina kutaurwa, muridzi we data anobvumikisa zvakakwana kune yakakwana kana chikamu chakabvumirwa kusevengedzwa kweinotaurwa data kwenguva inodiwa kuzadzisa zvataurwa pamusoro apa.
Online servicios Telemáticos SL inozvipira kuzadzisa chisungo chayo chekuvanzika chega ruzivo uye basa rayo kuzvichengeta, uye kutora maitiro ekuchengetedza anodikanwa nemutemo unoshanda kuti udzivise kushandurwa kwayo, kurasikirwa, kurapwa kana kuwana zvisiri pamutemo. , nguva dzose zvinoenderana nemamiriro enetekinoroji aripo.
Mushandisi anokwanisa kutungamira kutaurirana kwako uye kushandisa kodzero dzekuwana, kugadzirisa, kudzima nekupikisa kuburikidza neemail: info (at) contact.online pamwe nehupupuri huripo mumutemo, senge fotokopi yeDNI kana zvakafanana, zvichiratidza mune iyo nyaya " DATA KUSVIRIRA ”.
Ruzivo rwese uye zvinyorwa zvinoshandiswa panguva yekuita chibvumirano, kuvandudza uye kuitisa iyo contractual Mamiriro ezvinhu ayo anogarisana hukama pakati pePrivate servicios Telemáticos SL uye Mutengi chinhu chakavanzika. Ruzivo rwechakavanzika haruzonzwisiswe seruzivo rwunoburitswa nechibvumirano pakati pemapato, icho chinova pachena kune chikonzero chimwe chete kana icho chinofanira kuburitswa zvinoenderana nemirairo kana nedare redzimhosva remutungamiriri ane chinzvimbo uye icho chinowanikwa ne wechitatu bato iro risiri pasi pechisungo chero chekuvanzika. Mapato ese ari maviri anosungirwa kuita basa rekuvanzika uye arichengete kwenguva diki yemakore maviri (2) mushure mekupera kwezvibvumirano zvakambotaurwa zvinogadzirisa hukama hwe Online servicios Telemáticos SL uye Mutengi.
Ruzivo rwese rwunogamuchirwa nemutengi, kungave mifananidzo, zvinyorwa, data rekuwana sevashandisi uye mapassword eWordPress, kugamuchira kana vamwe, zvichabatwa zvakavanzika, kuendesa kune vechitatu kunorambidzwa zvachose kunze kwekunge tave nemvumo yako uye nguva dzose chinangwa chimwe chete icho data rakawanikwa.
AndroidPop.com inochengetera kodzero yekuita, chero nguva uye pasina ziviso isati yasvika, kugadzirisa uye kugadzirisa kune ruzivo rwurimo paWebhu, kumisikidzwa uye kuratidzwa, mamiriro ekuwana, mamiriro ekubvumirana, nezvimwe. Naizvozvo, iyo USER inofanirwa kuwana zvakavandudzwa vhezheni zvepeji.
Hapana mamiriro AndroidPop.com inoitisa chero kutyorwa kwechibvumirano kunoitika pachayo, kuregeredza nezve saiti, sevhisi kana chero zvirimo, kune chero kurasikirwa kwemabhenefiti, kurasikirwa kwekushandisa, kana chaiko, kwakakosha, zvisina kunangana kukuvara, kunoitika , kuranga kana kukonzeresa chero mhando yakatorwa mukushandisa kwako zvisizvo maturusi akapihwa
Basa rega reApplePop.com, ndere kupa iro rekushambadzira kondirakiti sevhisi mumitemo nemamiriro anoratidzwa mune ino kondirakiti.
AndroidPop.com haizovi nemhosva kune chero mhedzisiro, kukuvara kana kukuvara kunogona kubva mukusashandisa zvisirizvo zvigadzirwa kana masevhisi akapihwa.
Ruzivo uye zvivakwa zveindasitiri
PaInternet Servicios Telemáticos SL ndiye muridzi wekambani dzese dzeindasitiri nehungwaru kodzero yeiyo peji rePeoplePop.com, uye nezvezvinhu zvirimo, pakati pazvo pane magazini anotakurika pawebhu.
Izvo zvakanyatsorambidzwa kuchinjisa, kuendesa, kugovera, kushandisazve, kutumira kana kushandisa zvese kana chikamu chemukati peji rezveruzhinji kana zvekutengeserana pasina mvumo ye Online servicios Telemáticos SL.
Kukanganiswa kwe chero kodzero yambotaurwa kunganganisira kutyora kwezvibodzwa izvi, pamwe nemhosva inorangwa maererano nehunyanzvi. 270 et seq. yeCriminal Code yazvino.
Muchiitiko icho mushandisi achida kutaura chero chiitiko, kupindura kana kuita chikumbiro, anogona kutumira email kune info (pa) contact.online inoratidza zita rake uye surname, sevhisi inotengwa uye kutaura zvikonzero zveaari kuda.
Kuti ubate paInternet servicios Telemáticos SL kana kusimudza chero kusahadzika, mubvunzo kana kubvunza iwe unogona kushandisa chero nzira dzinotevera:
E-mail: info (pa) contact.online
Mutauro uyo chibvumirano pakati peAndroidPop.com neMutengi chichagumiswa chiSpanish.
Kutonga nemitemo inoshanda
AndroidPop.com neUSERERI vanozotongwa kugadzirisa gakava ringavepo kubva mukuwanikwa, kana kushandiswa kwewebsite ino, nemutemo weSpanish, uye woendesa kuMatare neMatare eDhorobha reGranada.